စက်တင်ဘာထာဝရ: မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု့ကိစ္စအတွက် ယင်းအချိန်ကာလက ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)တွင် တပ်ရင်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကိုသိုက်ထွန်းဦးနဲ့ ကိုထိန်လင်း ဆွေးနွေးခြင်း အသံဖိုင်း
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု့ကိစ္စအတွက် ယင်းအချိန်ကာလက ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)တွင် တပ်ရင်းမှုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကိုသိုက်ထွန်းဦးနဲ့ ကိုထိန်လင်း ဆွေးနွေးခြင်း အသံဖိုင်း
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 2:07 PM
kmg January 5, 2012 at 5:51 PM
ကိုထိန်လင်းနဲ့ကိုအောင်မိုးဝင်းခင်ဗျား~~~အကိုတို့အမနန်းအောင်ထွေးကြည်တို့အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ဒီလူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်အတွက်အပြစ်မရှိပဲအပြစ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုလက်စားခြေရမယ်ဗျာ။ အားလုံးအတွက်အရမ်းခံစားရပါတယ်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကမှာဒီလိုမိုက်ရိုင်းလူမဆံတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေထပ်မပေါ်ပေါက်အောင် တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့တရားခံတွေကိုအမြန်ဖေါ်ထုတ်ပြီးအပြစ်ပေးရမှာပါ ။ကျနော်က online မှာတွေ့ရလို့ဖတ်ရသိရတာပါ ။ကျနော်က korea မှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသူပါ။ ကူညီစရာရှိရင်လဲအသင့်ပါပဲခင်ဗျာ့။ လိုအပ်ရင်ထပ်ဆက်သွယ်ပါ့မယ်။ အကိုရေပြတ်သားပါ။ အမနန်းအောင်ထွေးကြည်ကိုလဲအမတယောက်လိုစိတ်မကောင်းပါဘူး
zhkk January 6, 2012 at 1:33 AM
Go ahead! I totally support you and deep respect to you. I want all young generation students to know what happend in our student's history. Your true story can protect our new generation from the same mistake in the future. The time is ripe. Remember the last words that Ko Htun Aung passed to you and respect unsung heros.